श्रीमानबाट टाढा हुन महिलाको यस्तो चाल, वास्तविकता खुल्दा प्रहरी नै चकित ! – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on श्रीमानबाट टाढा हुन महिलाको यस्तो चाल, वास्तविकता खुल्दा प्रहरी नै चकित !
यी महिलाले उत्तर प्रदेशको गाजियाबादस्थित हिडन ब्यारेज नजिकै लगेर आफ्नो कार राखिन्, कारमा सु’सा’ इड नोट राखेर फरार भइन् । पछि उनी बैंगलोरमा भेटिइन् । आ त्म ह त्या को झुटो कहानी रच्ने कोमल तालान नामकी यी महिलाले गाजियाबादको नहरको पुलमा आफ्नो गाडी राखिन् । त्यसपछि उनले नहरमा हाम्फा लेर आ त्म ह त्या गरेको खबर फैलियो । ३ दिनदेखि गोताखोरले नहरमा ला श खोजिरहेका थिए तर ला श भेटिएको थिएन ।
कोमलले कारमा सु’सा’ इट नोट पनि छाडेकी थिइन् जसमा उनले आफूले आ त्म ह त्या गर्न लागेको लेखेकी थिइन् । कोमलले यो सब गर्नुको पछाडि उनी श्रीमानदेखि हैरान भएको पाइएको छ । उनले आ त्म ह त्या को झु’टो कहानी रचेर श्रीमानलाई कानूनी रुपमा फ’सा’उँन चाहेकी थिइन् । शनिबार बिहान ११ बजे पुलिसले पुलबाट बेवारिसे अवस्थामा स्कार्पियो कार बरामद गरेको थियो ।
← आमा-बुबा दुवै ‘पोइला’ गए : भाइ-बहिनीको जिम्मेवारी १४ वर्षिया अनिताको थाप्लोमा ! → प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ट्वीटरको पासवर्ड चो*रि